Egumbini leCanyon & Ukudla kwasekuseni - I-Airbnb
Egumbini leCanyon & Ukudla kwasekuseni
Fondo, Trentino-Alto Adige, i-Italy
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Thomas
Amakamelo akabili makhulu, futhi akwazi ukunikeza inothi elihle lokusha ngenxa yefasitela elikhulu elibheke i-Rio Sas Canyon. Amakamelo afakwe i-TV futhi igumbi ngalinye linesithombe esibonisa ubuhle bendawo yethu.
Amakamelo aphindwe kabili anemibhede engashadile ayathakazelisa ngoba ahlukaniswe udonga phakathi nendawo olunikeza ubumfihlo obufanele kubantu abahlala futhi bahlonyiswe ngendlu yokugezela yombhede ngamunye. Iphelele kubagibeli bezithuthuthu noma abangani emgwaqeni!
I-R&B yethu iqhutshwa umndeni, sithanda ukwenza izivakashi zethu zizizwe zisekhaya.
Isakhiwo sethu sisemgwaqweni omkhulu oxhumanisa amaphasi amathathu (i-passo mendola, i-passo palade ne-passo tonale) indawo enhle kakhulu kulabo abahamba ngesithuthuthu noma imoto. Izindlela eziningi zezintaba nazo zisuka lapha, iLake Smeraldo ingaphakathi kwebanga lokuhamba. I-Rio Sas Canyon idlula ngemuva kwesakhiwo, ifike esigcawini. Ake sithi iyindawo ekahle yalabo abafuna ukuhlala isikhashana noma labo abaphupha iholidi elihle. Sibheke ngabomvu ukukubona maduze!
Amakamelo aphindwe kabili anemibhede engashadile ayathakazelisa ngoba ahlukaniswe udonga phakathi nendawo olunikeza ubumfihlo obufanele kubantu abahlala futhi bahlonyiswe ngendlu yokugezela yombhede n…
Umbhede omkhulu ongu-1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosana
4.70 out of 5 stars from 41 reviews
4.70 (izibuyekezo ezingu-41)
Hlola ezinye izinketho ezise- Fondo namaphethelo